အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ မိတ်ကပ်မှာ ဘာ့ကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်တာလဲ? - Lifestyle Myanmar
အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ မိတ်ကပ်မှာ ဘာ့ကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်တာလဲ?
ကိုယ်ချစ်ရသူကို အထူးခံစားရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ကျွန်တော်တို့ ဘာကြောင့် စာများများဖတ်သင့်သလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း (၇)ချက်
Cleansing Oil ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ?
လုံးဝလိုက်ဖက်ညီတဲ့ လက်တွဲဖော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ပြသနေတဲ့ လက္ခဏာ (၆)ချက်
ကြော်ဖို့အတွက် ဘယ်ဆီအမျိုးအစားက အကောင်းဆုံးလဲ?
အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်ခံရနေသော ဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှာ တွယ်ကပ်နေကြသော အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အကြောင်းပြချက် (၇) ချက်
သင်ဟာ ဘဝလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ လက္ခဏာ (၈)ချက်
အမျိုးသမီးတွေကို ထူးထူးခြားခြားခံစားမှုဖြစ်စေနိုင်သော အမျိုးသားတွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအရာ (၁၀) ချက်
တဖက်လူက သင့်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတာ သိနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၈)ချက်
August Vachiravit ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သိထားသင့်သောအရာ (၉) ချက်
ပိုချမ်းသာချင်တယ်ဆိုရင် မလုပ်ဘဲနေတာက ပိုကောင်းသောအရာ ( 8 ) ချက်
သွားဆေးခန်းသွားပြစရာတောင် မလိုအပ်မယ့် သွားနှင့်ခံတွင်းစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ အကြံပေးချက် (၁၀)ခု
လူတွေဟာ ၁၉၂၀ အစောပိုင်းမှာတည်းက မိတ်ကပ်ကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ရှေးခေတ်က မိတ်ကပ်တွေကို အခမ်းအနားတွေမှာသာ သုံးခဲ့ကြပေမယ့် ဒီနေ့မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အချိန်တိုင်း မိတ်ကပ်လိမ်းနိုင်ပါတယ်။ မိတ်ကပ်လောကမှာ revolution ပြောင်းလဲမှုတွေရှိခဲ့ပြီး အရင်တုန်းကထက် ပိုကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ် အလှအပကုမ္ပဏီအများစုက ဘယ်အလှကုန်ပစ္စည်းမဆို မစတင်ခင်မှာ စေ့စေ့စပ်စပ် သုတေသနလုပ်ကြရပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း ကိုယ်ဝယ်တဲ့ မိတ်ကပ်အမျိုးအစားကို သတိထားဖို့ လိုပါသေးတယ်။ ဘယ်အလှကုန်ပစ္စည်းမဆို မဝယ်ခင်မှာ မိတ်ကပ် reviews တွေကို သေချာဖတ်ပါ။ ဒါဆိုရင် အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ မိတ်ကပ်ကို ဘာ့ကြောင့်ဝယ်သင့်တာလဲ? ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါ။
၁။ မိတ်ကပ်ကောင်းကောင်းက အသားအရေကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်
ကျွန်မတို့အားလုံးက ကြည့်ကောင်းဖို့နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အသွင်အပြင်ကို မြှင့်တင်ဖို့ မိတ်ကပ်လိမ်းကြပါတယ်။ သို့သော် မိတ်ကပ်လိမ်းခြင်းရဲ့ အလှတရားက ဒီထက်မပိုပါဘူး။ ကြည့်ကောင်းအောင် မိတ်ကပ် လိမ်းတယ်ဆိုပေမယ့် ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ အသားအရေကောင်း ရရှိဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းမိတ်ကပ်က သင့်အသားအရေကို အမြဲကျန်းမာစေပြီး ယခင်ကထက် ပိုကြည့်ကောင်းစေပါတယ်။ သင်မဝယ်ခင်မှာ အလှအပရေးရာသုံးသပ်ချက်အချို့ကို သေချာစစ်ဆေးပါ။ အရည်အသွေးကောင်းမိတ်ကပ်တွေက UVA နဲ့UVB ရောင်ခြည်ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများ ပါဝင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ပေါ့ပါးပြီး ချွေးပေါက်ကို မပိတ်ဆို့စေပါဘူး။
၂။ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ မိတ်ကပ်က အသုံးခံပါတယ်
Full coverage ဖြစ်ဖို့အတွက် ပိုက်ဆံအများကြီးသုံးရတဲ့ အောက်ခံမိတ်ကပ် (သို့) တခြားမိတ်ကပ်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ဝယ်ဖူးလား? လူအများစုအတွက် ဒါက အရမ်းစျေးကြီးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အဲ့လိုစျေးကြီးတဲ့အလှကုန်တွေက အချိန်များများမပေးရဘဲ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ပြီးစီးသွားစေတယ်၊ ရလဒ်က ကျေနပ်အားရမှု ရှိစေပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းမိတ်ကပ်က full coverage ဖြစ်ဖို့အတွက် အနည်းငယ်သာ သုံးဖို့လိုတာကြောင့် တခြားမိတ်ကပ်တွေထက်စာရင် အနည်းငယ် အသုံးခံတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။
၃။ သင့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကို တိုးစေပါတယ်
လူတွေက သင်ကောင်းမွန်စွာ လိမ်းခြယ်ထားတဲ့ မိတ်ကပ်ကို ကြည့်ပြီးရင် သင်အသုံးပြုတဲ့ အလှကုန်ကို သေချာမေးပါလိမ့်မယ်၊ ကိုယ်က အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ မိတ်ကပ်ကိုသုံးရင် သူတို့ကို ကိုယ်သုံးနေတဲ့ brand အတိအကျကို ပြောပြဖို့ ပိုယုံကြည်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ ချီးကျူးစကားတွေက သင့်ရဲ့ confidence ကိုမြှင့်တင်ပေးပြီး တစ်နေ့တာလုံးကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
၄။ သင့်ရဲ့အသွင်အပြင်ကို တိုးတတ်စေပါတယ်
အထက်မှာဖော်ပြထားသလိုပဲ လူတိုင်းက ကြည့်ကောင်းစေချင်လို့ မိတ်ကပ်သုံးကြတာပါ။ အရည်အသွေးကောင်းမိတ်ကပ်တွေက သင့်ရဲ့အသွင်အပြင်ကို ပေါ်လွင်စေပါတယ်။ မိတ်ကပ်က သင့်ရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေကို တိုးတတ်စေ၊ ထူးခြားစေပါတယ်။ ဥပမာ- ထင်းပြီး စျေးကြီးတဲ့ lookကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင် အနီရောင်နှုတ်ခမ်းနီကို စမ်းသုံးကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပါးနီအနည်းငယ် လိမ်းထားခြင်းဖြင့် သင့်ပါးပြင်ကို ပေါ်လွင်စေနိုင်ပါတယ်။
၅။ သင့်အသားအရေကို ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်
ကောင်းမွန်တဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် ကောင်းမွန်တဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုရှိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မိတ်ကပ်ကို တစ်နေကုန် လိမ်းထားပြီးပြီးနောက် အိပ်ရာဝင်တဲ့အခါ မိတ်ကပ်ဖျက်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ သင့်မျက်နှာကို cleanser ကောင်းကောင်းနဲ့သစ်ပါ။ မျက်နှာသေချာသုတ်ပြီး moisturizer လိမ်းပါ။
အရည်အသွေးကောင်းတဲ့မိတ်ကပ်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ မိတ်ကပ်လိမ်းရာမှာ လှပရုံတင်မကဘဲ တောက်ပပြီး ကျန်းမာတဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်ရနိုင်တာကြောင့် သင်ရင်းနှီးရကျိုးနပ်ပါလိမ့်မယ်။
ယနေ့ခေတ်မှာ cleanser တွေနဲ့ပတ်သတ်လာရင် ရွေးချယ်စရာထုတ်ကုန်တွေက အများကြီး ရှိလာပါပြီ။ အဲ့ဒီထဲမှာ cleansing oils တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့က မိတ်ကပ်၊ နေရောင်ကာလိမ်းဆေးနှင့် Sebum တွေကို အလွယ်ဖယ်ရှားရာမှာ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက...
ကျန်းမာသေ ာသွားတွေက ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်းရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မပါဘဲ ကောင်းကောင်းမစားနိုင်ပါဘူး။ သူတို့က ကောင်းမွန်စွာ စကားပြောဆိုဖို့အတွက်လည်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ သွားကြွေလွှာတွေက သင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ အမာကျောဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်။ အရိုးထက်တောင် ပိုမာပါတယ်၊ ဒီသွားကြေလွာက မာကျောပြီး သွားပိုးစားခြင်းကို ကောင်းစွာကာကွယ်နိုင်ပေမယ့်...
အလွန်အကျွံလုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ် ပြန်ထိခိုက်စေနိုင်မယ့် ကျန်းမာစေသော နည်းလမ်း(8) ချက်
ကျွန်မတို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျန်းမာသန်စွမ်းစေဖို့ (သို့) ပိုမိုပျော်ရွှင်လာစေဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုမလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လမ်းညွှန်ချက်တွေများစွာကို ကြားရပါလိမ့်မယ်။ သင်ကြားသမျှ၊ ဖတ်သမျှကို မယုံဖို့ ပထမဦးဆုံးအကြံပြုပါရစေ။ ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ် တန်ဆေး/လွန်ဘေးပါ။ လွန်လာရင် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကို ခံစားလာရပါလိမ့်မယ်။ ဒီ့ထက် ၁။...
လိင်သာယာမှုကနေ တားဆီးပေးနေတဲ့ အမျိုးသမီးပြဿနာ (၆)ခု
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ သာယာမှုကနေ တားဆီးပေးတဲ့ အမျိုးသမီးပြဿနာတွေကို အလေးအနက်ထားသင့်ပါတယ်။ Sexက လူသားဖြစ်တည်မှု အားလုံးအတွက် အခြေခံဇီဝလိုအပ်ချက်တွေထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပုံစံဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒါက ပျော်ရွင်မှုနဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသော အလေ့အထတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင်ကြိုးကို အားကောင်းစေရုံသာမက ယုံကြည်မှု၊...